सूर्य चिन्ह फ्रिज हुन लागेको प्रचण्ड–माधवको आशंका ! - RoadMapNews
सूर्य चिन्ह फ्रिज हुन लागेको प्रचण्ड–माधवको आशंका !
RoadMap News	प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण ०६, २०७७ समय: ११:११:००
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा विभाजन भएसँगै चुनाव चिन्ह सूर्य आफ्नो पक्षमा पार्ने होडबाजी चलेको छ । दुवै पक्षले सूर्य आफ्नो समूहले पाउने दावी गरेतापनि निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णयमा सो विषयको टुङगो लाग्ने देखिन्छ । तर प्रचण्ड–माधव पक्षका नेताहरुबीच आयोगले सूर्य चिह्न फ्रिज गरेर दुवै पक्षलाई अलग दल दर्ताको लागि बोलाउने तयारी गर्छ कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै सो समूहले निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति आशंका जनाउँदै गत माघ २८ चेतावनीपूर्ण भाषणहरु गरिरहेका थिए । त्यस्तै सो समूह नेकपा आधिकारिकता टुंगो नलाग्दै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताबारे दलहरुसँग छलफल थाल्नुले पनि अब नेकपाको आधिकारिकता विवादमा आयोग नअल्झिने संकेतप्रति झस्किएको छ ।
यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा बैधानिकताबारे अहिलेसम्म निर्णय नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगको आलोचना गरेका छन् । आयोगले निर्वाचन गराउनै नचाहेको त होइन भन्ने उनको आशंका छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा बुटवलमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यही गर भन्न नभन्ने बताउदै उनले भने, ‘अदालतले संसद् फिर्ता गर्छ भने पनि हामीलाई ठीक छ, चुनाव गर भन्छ भने पनि ठीक छ ।’ नेकपाको बैधानिकताबारे निर्णय नगरेकोतर्फ संकेत गर्दै निर्वाचन आयोगको आलोचना गरे । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको ६ महिनाभित्र चुनाव भइसक्नुपर्ने भन्दै कांग्रेस सभापति देउवाले भने, ‘निर्वाचन आयोगलाई मतलब नै छैन । यो निर्वाचन आयोगलाई म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेको ६ महिनाभित्र चुनाव गराइसक्नुपर्छ ।’
उनले अघि भने, ‘ओलीले वैशाखसम्म चुनाव गराउँछु भनेको छ । निर्वाचन आयोगले किन भन्दैन ? निर्वाचन आयोगमाथि शंका गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।’ निर्वाचनको तयारी गर्न अदालतको निर्णय कुर्नु नपर्ने बताउँदै ‘किन कार्यकालिका किन प्रकाशित गर्दैन ? चुनाव चिन्हको झगडा छ, किन चुनाव चिन्ह दिँदैन निर्वाचन आयोगले ?’ सूर्य चुनाव चिन्ह एउटै रहको भन्दै उनले प्रचण्डलाई दिने कि ओलीलाई दिने छिटो निर्णय गर्न आग्रह गरे । सूर्य चिन्ह नपाए ओलीले चुनाव नगराउने उनको आशंका गर्दै देउवाले पनि सूर्य चिह्न ओली वा प्रचण्ड दुवैलाई नदिने हो भने फ्रिज गर्न आयोगलाई सुझाएका थिए ।